मेलम्चीका १५ बाचा अधुरै, सडक किनारमा पानीको जोहो गर्दै काठमाडौंवासी
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४० करोड लिटरभन्दा बढी पानी खपत हुन्छ । ट्यांकर व्यवसायी, पानी उद्योग र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडजस्ता निकायले उपत्यकावासीको खाने पानीको माग पूर्ति गर्छन् ।
सडक किनारका फुटेका पाइप, ढुंगेधाराबाट पानी भरेर निर्वाह गर्नेहरू पनि राजधानीमा छन् । माग र आपुर्तिको यो तथ्यांकभित्र नपर्ने मानिसहरू पनि यो शहरमा छन् ।
सातदाेबाटो चोक र ग्वार्को चोकको मध्यभागतिर सडकको पश्चिमी किनारमा पहेँला रङका रित्ता जर्किनहरूको चाङ छ । त्यही चाङमा आफ्ना रित्ता भाँडा मिसाउँछिन् दिलकुमारी राई । दायाँ र बायाँ दुवै काँधमा झुण्ड्याएर उनले छवटा जर्किन ल्याएकी छिन् ।
यहाँ एउटा मान्छे पनि मुस्किलले अट्ने सानो खाल्टोभित्र छिरेर पानी भर्नुपर्छ । खाल्टोको नजिकै गएर हेरेपछि दिलकुमारी बर्बराउँछिन, ‘आज त पानी सानो रै'छ ।’
‘बिहान लुगा धुने र पानी भर्नेहरूको झगडा भयो । अनि पाइप काटे,’ छेउमा उभिएकी अर्की महिलाले पानी सानो हुनाको कारण सुनाइन् ।
फुटपाथ छेउको यो पानी दिलकुमारीजस्ता धेरैका लागि पानीको एक मात्र स्रोत हो । घरायसी प्रयोग मात्र होइन, दिलकुमारीका लागि त पिउने पानी पनि यही हो ।
लक डाउनअगाडिसम्म दिलकुमारी गलैँचा उद्योगमा काम गर्थिन् । उनका श्रीमान् निर्माण मजदुरको काम गर्थे । लकडाउनले श्रीमान्/श्रीमती दुवैको काम खोसियो । श्रीमान्‌को काम अहिले सुरु भए पनि दिलकुमारीको काम भने अझै सुरु भएको छैन् ।
ग्वार्कोछेउमै बस्ने दिलकुमारीलाई सामाजिक दूरी, हात धुने कोरोना संक्रमणबाट जोगिने प्राथमिक उपाय हुन् भन्ने थाहा छ । तर, पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताका अगाडि उनी निरीह छिन् । पानीको यो लाइन र भीडभाडमा ठेलमठेल नगर्ने हो भने दिलकुमारीको परिवारले पानी खान पाउँदैन् ।
‘खाने पानी त नपाउने हामीजस्तालाई हात धोऊ भन्ने ?’, दिलकुमारी जंगिन्छिन्, ‘खानेपानी त छैन, कसरी हात धुनु ?’
साँझको साढे ५ बजे, जडीबुटीबाट पेप्सीकोलातर्फ जाने सडक किनारमा रित्ता भाँडाहरू लस्करै राखिएका छन् । सडकमा गुड्ने गाडीले उडाएको धुलोले सडक किनारमा राखिएका यी रित्ता भाँडा ढाकिन्छ । पानी भर्न उभिएकाहरू कोही आफ्नो मुख छोप्छन त कोही भाँडाको मुख छोपेर धुलो छेक्ने प्रयास गर्छन् ।
सडक किनारमा राखिएको २ हजार लिटरको ट्यांकीबाट पानी भर्ने पालो पर्खेर बसेकी छिन् कुमारी श्रेष्ठ । आफ्नो पालो नाआउँदै ट्यांकीको पानी सकिन्छ कि भनेर छटपटाउँदै गरेकी कुमारी आफूभन्दा अगाडि रहेका रित्ता भाँडा पनि गन्दै छिन् । ‘१,२,३,४........१८, १९, २०...ओहो ! आज पालो आउलाजस्तो छैन,’ ढिला आएकोमा पछुतो मान्दै उनी भन्छिन् ।
ढिलो भयो भने पानी पाइँदैन भन्ने थाहा पाएरै कुमारी ट्यांकी खुल्ने समय (साँझ ४ बजे) भन्दा २ घण्टा अगाडि नै दिउँसो २ बजे छोरासहित पानी भर्न आएकी हुन् । साढे ३ घण्टा पर्खिंदा पनि अझै कुमारीको पानी भर्ने पालो आएको छैन । कुमारीको तीन जना परिवारको पिउने पानीको स्रोत यही हो । घण्टौँ लाइन लागेर यहाँबाट दैनिक १ सयभन्दा बढी मानिसले पानी भरेर लान्छन् ।
चाबहिल चोकबाट नारायणगोपाल चोकतर्फ जाने सडकको दायाँतर्फको भित्तासँगै जोडिएको छ सानो धारो । सडकसँगै जोडिएको यो धारोको ठीक तलबाट ढल बग्छ । धारोसँगै सानो खाल्टोमा लुगा, हातमुख धुन पानी पनि जमाइएको छ । यही फोहोर भएको पानीको निकास खोज्दैछिन् बबिता केसी ।
पानी भर्न पालो कुरिरहेकी बबिताको परिवार ४० वर्षदेखि यही पानी प्रयोग गरिरहेको छ । बबिताको चार जनाको परिवार यही पानीको भरमा चलेको छ । बबिता यहाँ बिहान र बेलुका दुई समय आउँछिन् । ‘पैसा भए त किनेर खान्थ्यौँ नि,’ ‘यस्तो महामारीमा पनि यसरी पानी खानुपरेको छ ।’
सानो पानी आउने यो धारोमा २० लिटरको एउटा भाँडो भर्न आधा घण्टा समय लाग्छ । पानी भर्न पालो पर्खिनुपर्दा त दिनै बित्छ ।
जडीबुटी बस स्टप, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तारबारसँगै जोडिएको भित्ताबाट आउने पानी भर्नेहरूको लाइनले सडक भरिएको छ । रित्ता भाँडाको लाइन अरनिको राजमार्गसम्मै पुग्न आँटेको छ ।
साँझको साढे ४ बजेको छ । ५३ वर्षे यारा राई घरी आकाशमा ढल्किरहेको सूर्यतर्फ हेर्छिन् त घरी पानीको लाइनतर्फ । ५३ वर्षे यारालाई आज पनि यहीँ रात पर्छ कि भन्ने पीर परेको छ । ‘यहीँ रात पर्छ आज त !’, यारा चिन्तित हुँदै भन्छिन् ।
जडीबुटीको छाप्रोबाट पानी भर्न आएकी याराको परिवारमा पाँच जना छन् । उनीहरूको पानीको स्रोत यही हो । ‘किनेर खाऊँ भने सकिँदैन, पानी नखाई बाँच्न सकिँदैन,’ दोहोरो बाध्यता सुनाउँछिन् यारा ।
२० लिटरका पाँचवटा भाँडा लिएर आफ्नो पालो पर्खिरहेकी छिन् मुना तामाङ । मुना पानी भर्न आएको ४ घण्टा भइसक्यो । अझै पालो आएको छैन उनको । पालो आए पनि जडीबुटीको वल्लो किनारबाट नरेफाँटसम्म पाँच जर्किन पानी पुर्‍याउन कम्तीमा पनि १ घण्टा लाग्छ । ‘आधा दिन त पानी खोज्दै बित्छ,’ मुना सुनाउँछिन् ।
मुना बस्ने घरमा पानी आउँदैन । किनेर खान आर्थिक हैसियतले पुग्दैन । उनी भन्छिन्, ‘खान, लुगा धुन, नुहाउन यही पानी प्रयोग गर्ने हो । यहाँबाट पानी लिन नपाए त हामी पानी नपाएरै मर्छौं ।’
जडीबुटीबाट त्रिभुवन विमानस्थलको तारबार लगाइएको किनारबाट अलिकति उत्तरतर्फ गएपछि एउटा इनार भेटिन्छ । इनारछेउमा बसेका छन् जगन मण्डल ।
निर्माण मजदुरको काम गर्ने जगनले ३ घण्टापछि बल्ल पानी भर्ने पालो पाए । अब उनले २० लिटरको बाल्टिन भर्नुपर्नेछ ।
सुक्नै आँटेको यो इनारमा आधा घण्टा कुरेपछि मात्र पानी तान्ने डोरीमा झुण्ड्याइको दुई लिटरको भाँडो भरिन्छ । त्यही पनि यो इनारबाट सफा पानी आउँदैन । ‘जस्तो भए पनि हाम्रा लागि त यही पानी हो,’ जगन भन्छन् । घण्टौँ लगाएर पर्खेपछि पनि फोहोर पानी आउने यो इनार प्रयोग गरेको वार्षिक १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सप्तरीका जगन यहाँ चार जनाको परिवारसँगै बस्छन् ।
बाचामा अड्किएको मेलम्ची
१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु हुँदा आयोजना सुरु भएको ९ वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य थियो । तर, आयोजना सुरु भएको करिब ३ दशक पुग्नै लाग्दा पनि मेलम्चीको पानी आउने छाँट भने देखिँदैन ।
२. सरकारले निकै ठूलो आश्वासनका साथ पहिलो पटक २०७० असोज ५ गतेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बाचा गर्‍याे । बाचा गरेको मितिमा पानी आएन ।
३. दोस्रो पटक सरकारले १ वैशाख २०७३ भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने वाचा गर्‍याे ।
४. दोस्रो पटकको बाचा पूरा गर्न नसकेपछि २०७३ को दसैँमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने घोषणा भयो । पहिलो पटकको जस्तै यस पटक पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएन ।
५. २०७३ को दसैँमा पानी ल्याउन नसकेपछि सरकारले २०७४ को दसैँमा पानी ल्याउने नयाँ बाचा गर्‍याे ।
६. सरकारले २०७४ मंसिरमा २०७५ वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं पुर्‍याउने बाचा गर्‍याे ।
७. अघिल्लो पटक तोकिएको बाचाअनुसार पानी ल्याउन नसकेपछि सरकारले १५ असोज २०७५ को नयाँ बाचा गर्‍याे ।
८. २०७४ चैतमै खानेपानीमन्त्री बिना मगरले २०७५ को दसैँअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बाचा गरेकी थिइन् । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर बागमतीमा स्वीमिङ र र्‍याफटिङसम्म गराउने सपना उनले देखाएकी थिइन् ।
९. २०७४ चैतको एक कार्यक्रममा मन्त्री मगरले २५ दिनमै मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म पुर्‍याउने बाचा पनि गरेकी थिइन् । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल पुग्नु त परै जाओस्, मन्त्रीले भनेको समयमा मेलम्चीको पानी सुरुङमा समेत हालिएन ।
१०. तत्कालीन संसद्को विकास समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमनपश्चात् २०७५ को दसैँअगाडि नै काठमाडौंमा पानी आइपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
११. १६ मंसिर २०७५ को विकास समितिको बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले ६० दिनमै पानी ल्याउने ठोकुवा गर्दै भनेका थिए, ‘म ठोकुवाका साथ भन्छु, दुई महिनामा सबै काम सकिन्छ र त्यसको सात दिनभित्र पानी आउँछ ।’
१२. मन्त्रालयका सचिवले ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बाचा गरिरहँदा उनले विकास समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणमा भने २०७९ सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने लेखिएको थियो ।
१३. २०७५ को दसैँसम्म काठमाडौंमा पानी ल्याउन नसक्ने देखिएपछि खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी २०७५ को तिहार (कात्तिक) सम्ममा काठमाडौं ल्याउने गरी बाचा सार्‍याे ।
१३. २०७५ को कात्तिक पनि बितेपछि सरकारले फागुनको बाचा गर्‍याे । फागुनमा मेलम्चीको पानी आउने भयो भनेर काठमाडौंवासीले दिनगन्ती सुरु गरिरहेको समयमा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले मेलम्चीबाट हात झिक्यो ।
१४. सीएमसी फरार भएपछि १ फागुन २०७६ मा मन्त्री बिना मगरले २०७७ असारसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने दाबीसहित श्वेतपत्र जारी गरेकी थिइन् ।
१५. मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बाचा गरिरहने तर, बाचा पूरा गर्ने मिति भने सारिरहने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कुरा काट्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्र्याउने बाचा गरेको छ । २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा २०७७ को असारभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बाचा गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, ०९:१६:००
प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज साढे १२ बजे 1 min read